नयाँ दैनिक | कोमल ओलीको सुझाव : ‘भ्यालेन्टाइन’ भन्दा ‘मुना-मदन डे’ मनाउनुस् !’ कोमल ओलीको सुझाव : ‘भ्यालेन्टाइन’ भन्दा ‘मुना-मदन डे’ मनाउनुस् !’ – नयाँ दैनिक
माघ २९, काठमाडौँ । लोक दोहोरी गायीका कोमल ओलीले युवायुवतीलाई ‘भ्यालेन्टाइन्’ भन्दा ‘मुनामदन डे’ मनाउन सुझाव दिएकी छिन् । विदेशी संस्कृतिको नक्कल गर्दै भ्यालेन्टाइन डे मनाउने युवायुवतीलाई ओलीले यस्तो सुझाव दिएकी हुन् । नेपाली पात्रो अनुसार फाल्गुण २ गते ‘भ्यालेन्टाइन डे’ अर्थात प्रणय दिवस पर्दछ ।
एक सञ्चार माध्यममा कुरा गर्दै राष्ट्रिय सभाकी सांसद समेत रहेकी ओलीले नेपालीले भ्यालेन्टाइन डे मनाउनु पर्छ जस्तो नलाग्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो संस्कार सँस्कृति पनि त्यस्तो होइन । भ्यालेन्टाइन मनाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । मनाउनेलाई रोक्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन । मनाउनुहुन्छ भने बुझेर मनाउनुस् । किन भ्यालेन्टाइन भनिएको थियो ? पढ्नुस्, पहिले अनि मनाउनुस् ।’
प्रणय दिवसबारे ओली भन्छिन् :
सुसंस्कृत तरिकाले मनाउनुस् । धेरै रकमको गुलाफ नेपालमा भित्रिदै छ । नेपालीहरुले गुलाफ किनेर नै कति रकम विदेशीने भयो । हामीले कम खर्च कसरी गर्ने ? आर्थिक रुपले कसरी सबल बन्ने ? सोच्नुपर्छ ।
पहिले मनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिएँँ । विश्वव्यापीकरणमा हामी घुलमिल भइसकेपछि हामी अछुतो रहन सक्दैनौँ भन्ने लाग्यो । प्रेम प्रस्ताव गर्ने कुरालाई हामी रोक्न सक्दैनौँ ।
मुना र मदनलाई हेर्नुहोस् । प्रेम गर्ने तरिका नै फरक छ । त्यसकारण हामी भ्यालेन्टाइन डे भन्दा मुनामदन डे मनाउदा कति राम्रो हुन्छ । युवाहरुले भ्यालेन्टाइन डे भन्दा मुनामदन डे मनाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । सबैले मुनामदन पढेका पनि छन् ।
मेरो प्रेमी भएको भए मैले भ्यालेन्टाइन मनाउनुपर्छ भन्दिनथेँ । हामी पूर्वीय संस्कार र सँस्कृतिमा हुर्केका मानिस हौँ । हामीले प्रेम व्यक्त गर्नको लागि गुलाफको फूल नै चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन ।